Akon’ny pelerinazy an-tongotra - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Dia an-tongotra am-bavaka natao tamin’ny 14 ka hatramin’ny 17 jolay 2014, niainga tao Antananarivo nankany Moramanga, no nokarakarain’ny ny Fikambanan’ny Karmely eto Madagasikara. Andiany faha 8 io. Mpivahiny miisa 300 no nandray anjara. Avy any Toliara, Manakara, Marovoay, Mahajanga, Arivonimamo, ary Antananarivo. Fanomanam-panahy hankalazana ny faha 500 taona nahaterahan’i Mb Terezy avy any Avilà (1515–2015) mpanavao ny fikambanan’ny Karmely no lohahevitra nanompanana io pelerinazy io.
Ny tendrombohitr’i Karmely no niandohan’ny fikambanan’ny Karmely. Ny toe-panahin’i Md Elia mpaminany, izay niaro ny voninahitr’Andriamanitra teo amin’io tendrombohitra io (1Mpanj 18,1-40), sy ny toe-panahin’i Masina Maria ambaran’ny anarana hoe Karmely no fototra ijoroana. Ny teny hoe Karmela manko dia midika ho hatsarana mandrakariva ao anatin’ny Soratra Masina (Ton 7,6 & Iz 35,1.2a). Ka amin’ny mahafeno hasoavana mahafaoka ny hatsarana rehetra an’i Maria azy no niantsoana azy hoe : “Notre Dame du Mont Carmel”
Io pelerinazy io dia fanaon’ny fianakaviamben’ny Karmely miaina ny aim-panahin’ny Karmely isaky ny 16 jolay. Ahitana ny sampana relijiozy lahy sy vavy ary lahika. Ny 16 jolay 1251 manko dia niseho tamin’i Md Simon Stock, mompera jeneralin’ny fikambanana, i Masina Maria ka nampanantena azy fa hametraka ny fikambanana eo ambany fiarovany ary nanolotra azy ny “scapulaire” ho marik’izany fanomezan-tokim-piarovana mandrakizay izany.
Tamin’ny 21 jolay 1643 no nisy fikasana hanankina ny prefekitiora apositolikan’i Madagasikara tamin’ny Pretra Karma, saingy an-jato taona taty aoriana vao tanteraka. Ny 22 novambra 1967 no nanaovan’ny Kardinaly Jérôme Rakotomalala fangatahana mba hahatongavan’ny Pretra Karma teto Madagasikara. Koa tonga nitsidika teto i Mompera Silvio Ferrai, Provensialin’i Venizy, tamin’ny volana jiona 1968. Ny 8 jiona 1969, nigadona teto anivon’ny riaka ireo misionera telo mirahalahy mpamaky lay dia i mompera isany : Gino Pizzuto, Sergio Sorgon, ary taoriana kely: i Angelo Doriguzzi. Ny 24 jolay 1970 no nanomboka ny asam-panirahana tao amin’ny Disitrikan’Itaosy. Ny 22 mey 1972 kosa no nanitarana ny asam-panirahana tany Andreba, tany amin’ny Diosezin’Ambatondrazaka, saingy tsy naharitra ela izay satria niangavian’ny Eveka mba hanabe voho ny fitoriana ny Evanjely tamin’ny faritr’i Moramanga ny Karma. Koa ny 4 marsa 1973 no nanombohan’ny asam-panirahana tao Andasibe, izay ao anatin’ny Diosezin’i Moramanga ankehitriny. Ny 15 okitobra 1980 no nanomboka nitantanan’ny Mompera Karma ny Disitrikan’ny Moramanga, izay manana ny foiben-toerany tao amin’ny Paroasin’ny Fo Masin’i Jesoa. I Mompera Sergio no voatendry ho Curé Karma voalohany tao, ilay nahafoy ny ainy ho an’ny ondriny satria nisy namono tamin’ny fomba mampivarahontsana ny 7 janoary 1985. Natsipy teny amoron-dalana tamin’iny làlan’i Moramaga iny ny fatiny. Ankehitriny dia ao Ambarilava Moramanga no mijoro ny “Sanctuaire Notre Dame du Mont Carmel”.
Marihina fa ny Masera Karmelita dia efa tonga teto Madagasikara tamin’ny taona 1921: tao Betafo Antsirabe aloha vao nifindra tao Ampasanimalo-Antananarivo tamin’ny taona 1927. Ankehitriny, dia efa misy monasitera ihany koa ao Fianarantsoa, Toliara, Mahajanga, Moramanga, ary hisokatra tsy ho ela ny any Morondava.
Efa nisy hatramin’ny taonjato maro ny fikambanan’ny Karmely (1206–1214) ary ny mpanavao azy dia i Mb Terezy avy any Avila sy Md Jean de la Croix, tamin’ny taona 1562. Izy mianadahy dia samy nanao ny fiakara-midezan’ny tendrombohitr’i Karmely ho tandindon’ilay lalana mankany amin’Andriamanitra, ka ny tendron-tendrombohitra dia i Kristy. Izany no antony anaovana ny pelerinazy an-tongotra isan-taona miaraka amin’i “Notre Dame du Mont Carmel”. Fa na dia malama sy mideza aza manko ny lalana izorantsika, dia izy no hitantana antsika ho tody any an-tampon’ilay Tendrombohitra masina, dia i Kristy Tompo!